Lamiileen ABO Shaneedhaan manaaf qabeenyaan isaanii jalaa gubatee kuma 8 ol rakkoo irra jiraachuun isaanii ibsan - ዜና ከምንጩ
Naannoo Oromiyaa godina shawaa kaabaa aanaa Warra jaarsootti ABO Shaneedhaan manaaf qabeenyaan isaanii jalaa kan gubatee lamiileen kuma 8ol deggarsa tokkoo iyu hin argannee jechuudhaan Addis Maaladaatti himaniiru.
Addis Maaladaan jiraattota kana irraa mirkaneessuu kan dandeessee lamiileen kuma 8 ol manni isaanii jalaa gubatee bakka jireenyaa isaanii gad dhiisanii ergii bahanii baatii Onkololeessa 2014 irraa jalqabee mootummaa irras ta’ee dhaabbilee gargaarsa irraa deggarsa tokkollee argachuu dhabuu isaaniitiin rakkoo irra jiraachuu isaaniidha.
Jiraattoota naannichaa keessaa tokkoo kan ta’an Tasfaayee Niguusee namni jedhaman manni isaanii akka jalaa gubateef maatii isaanii torba dabalatee rakkoo mana jireenyaa akka qaban dubbataniiru. Mootummaan deggarsa kamuu nuuf hin taasifnee kan jedhan Tasfaayeen manni isaanii yammu jala gubatuu qabeenyaan isaaniis jalaa gufachuu isaatiin rakkoo nyaataafi saaxiluu isaanii ala mana jireenyaa argachuu dhabuu isaanii ibsaniiru.
Ittii dabaluudhaanis miidhaan daggala jiruu funaanuudhaan akka ta’e sababiin mana jireenyaa dhabanii jireenyii isaanii daggala keessa ergii taasifatanii torbee sadii ol lakkoofsisuu Addis Maaladaatti himaniiru.
Namnnii biraa rakkoo wal fakkaata akka qaban Addis Maaladaatti himan Daanyee Balaaydha.Akka ibsa Daanyeetti yoo ta’e aanaatti jalatti kan argamtuu ganda ‘’Bifinee Eeeraa’’ jedhamtuu kan jiran abbootiin warraa 256 mannii isaanii yammu gubatu Poliisoonni lama dhufanii ilaalaniif debi’u malee sana booda namnnii akkam taatan jedhee nuu gafatee hin jiruu jedhaniiru.
Daanyee balaay itti dabalaniis amma ammaatti bakka manneetii gubatanii hojjechuun akka hindanda’amne eeranii maanguddooli humna hin qabnnee homaa gochuu hin dandeenyu asumattan nu ajjeessaa jedhanii daaraa haxaa’anii jiraatuu jechuudhaan waan argan himaniiru.
Mana maree bakka bu’oota Ummataan shororkeessaa kan jedhamee ABO Shaneen wayita manneetii kana ibiddaan gubeetti dubartii qaroo dhabeeyyi tokkoo maanguddoo tokkoo dai’iimanni tokko miidhaan qaama isaanirra ga’eera. Namootiin naannicha jiran ammas rakkoon wal fakkaata biraa ni qaqqaba jedhanii yaaddoo keessaa jiraachuu isaanii ibsaniiru.
Yaada kennitoonni itti dabalaniis gara mana isaaniitti deebi’anii bakka jireenyaa akka hin hojjannee miidhaan ABO Shaneen raawwachaa jiru waan hin dhaabbanneef gareen hidhataa kun iddoo Haroo Calanqo laga Daraqi Laga Maqaa jedhamuu dhokattee waan jiruuf haleellaa isaaniirraan ga’a jiraachuu himaniiru.
Hidhattoonni naannichaa keellaawwan irratti ramadamanii deggarsa gochuuf yaalaa jiru kan jedhan Daanyeen da’iimaniifii dubartoonni wayita rasaasnni dhukaafamu akka yada’an isaaniin tasgabbeesuuniis akka isaanitti cimee mulisaniiru.
Daanyee Balaayii itti dabalaniis humna jeeqaa jedhamee qolachuudhaaf yaalaa kan jiran yoo ta’es hirinnii meeshaa akka isaanirra jiru ibsanii rakkoo isaanii kana bulchiinsa aanichaafi yoo beeksiisaniis amma ammaatti meeshaa ga’a akka hin argannee dubbataniiru.
JIraattonni naannichaa itti dabalaniis ABO Shaneetiin manneetiin kun yammu gubatan beleddonni manaa 800 ta’an manneetii kessatti du’u isaanii himaniiru.
Qaamni dhimmi isa ilaallatu deggarsa akka isaanii taasisu haleellaa gareen hidhataa kun isaan irraan ga’us akka dhaabsiifamuu jiraattonni kun gaafataniiru.
Haleellichii qaqqabe bakka jedhamee ganda Bifnee Eeraa jedhamtutti dura ta’a kan ta’an Warqiyyee Mokonnon gama isaaniitiin lamiileen kuma 8 ol buqqa’uu isaanii himanii gargaarsii akka taasifamuuf bulchiinsa aanaatii yoo himanis deebii akka hin argannee ibsan.
Warqiyyeen itti dabalaniis diinni kilo meetira tokkoo irra jira mootummaan meeshaan hafee rasaasa ille ija kudhan qofa nuu kennee naannichatti midhaan illee walitti qabuun hin dandamnnee jedhaniiru.
Addis Maaladaan rakko jiraaatoota kanaa ilaalchisee gara bulchiisa aanaa Warraa Jaarsoo obbo Ayyala Mangistuu yoo bil biltees bilbila waan hin kaafnneef deebii isaanii argachuu hin dandeenyee.
Total views : 7512581